လျှပ်စစ်ဆိုဖာ၏နိဒါန်းနှင့်အားသာချက်များ – Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd.
လျှပ်စစ်သဲခုံတွင်ကွဲပြားသောခလုတ်များရှိသည်. ခလုတ်ပေါ်ရှိအပေါ်နှင့်အောက်ခလုတ်များသည်ဆိုဖာ၏နောက်ကျောနှင့်အောက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်. လျှပ်စစ်ဆိုဖာ၏ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူ, ခေါင်းအုံးပေါ်ရှိလူတစ် ဦး ၏အနေအထားသည်လည်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သော backback အဖြစ်. တစ်ခါတစ်ရံ, လူတွေဟာသူတို့ရဲ့တင်ပါးတွေကိုနောက်ပြန်ရွှေ့ကြလိမ့်မယ်, နှင့်အပြန်အလှန်. သင်ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ- က ဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူ.
The "မှော်" ထိုင်ခုံမှာလျှပ်စစ်ဆိုဖာကုလားထိုင်၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, နောက်ကျောတက်, ပြီးတော့ထပ်ထည့်စရာမလိုပါဘူး ခြေတင်ခုံ ရှေ့၌, နှင့်ခြေသဘာဝကျကျလဲကျနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် footbath ထဲမှာထားနိုင်ပါတယ်. သင်တစ် ဦး footrest လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, သငျသညျသဘာဝကျကျထရန်ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဖွဲ့စည်းပုံရိုးရာကုလားထိုင်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပေမယ့်, စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပြီးတန်းမြင့်သည်.
1. လျှပ်စစ်ဆိုဖာမှာဖိအားလျော့နည်းစေသည်. ဆိုဖာကုလားထိုင်သည်ပျော့ပျောင်းပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဖိအားမှာသေးငယ်သည်, ဒါကြောင့်ဆိုဖာထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ရတာပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါ;
2. လျှပ်စစ်ဆိုဖာတွင်အနှိပ်ခံခြင်းစနစ်ရှိသည်. လူတစ်ယောက်ထိုင်တဲ့အခါ ခေတ်ပြိုင်ထောင့်ဆိုဖာ ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းလုပ်တယ်, ၎င်းသည်စမ်းရေများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများ၏သေးငယ်သောတုန်ခါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် Periodic အပြောင်းအလဲများ၏ elastic force ကိုအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, အရာအနှိပ်၏အခန်းကဏ္playကိုကစားနိုင်ပါတယ်.
3. လျှပ်စစ်ဆိုဖာသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်. ဆိုဖာ၏ကူရှင်သည်ပိတ်ချောကဲ့သို့သောပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အညိုရောင်, ရေမြှုပ်, စသည်တို့. အောက်မှာအများအပြားစမ်းရေတွင်းရှိပါတယ်, အရာပျော့နှင့် elastic နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ကြသည်.
အမှတ်အသားများ (Tags): ဆိုဖာအစုကိုဝယ်ပါ, လျှပ်စစ်ဆိုဖာ